Dina Lohan waxay beddeshay maskaxeed kadib markii ay aqbashay soo jeedinta Internet - dadka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Dina Lohan waxay beddeshay maskaxeed kadib markii ay aqbashay soo-jeedin internet ah - dad
Guurka waa la joojiyay
Dina Lohan - aad og tahay, hooyada lala yaabo ah Lindsay - iyo iyada doonan waayo daqiiqadii Jesse Nadler jejebiyey, dhamaanayey mid ka mid ah sheekooyinka jacaylka weyn ee internetka
"Way dhammaatay," ayuu yiri Nadler Bogga Lix . "Kaga bax."
Lohan, 56 sano jir ah, ayaa aqbalay soo jeedintii Nadler dhowr maalmood ka hor, inkastoo labadoodu aysan waligood la kulmin waji-fool-ka-fool. Waxay xiriirka shanta sano ee xiriirka ah ku yeesheen internetka, sida caadiga ah, ay soo jeediyeen Nadler oo Facebook ah.
Laakiin Nadler ayaa u sheegay Bogga Six in Lohan ay noqotey "hambalyo" iyo in "xidhiidhkooda ay bedeleen" tan iyo markii uu codsaday. oo waxay ku tidhi, Kac oo sariirtaada u jiifso.
Tani waxay u muuqataa in ay dhacdo isku-xirnaanta aan Wi-Fi-gareeyn.
Sidaas daraadeed, Nadler iyo Lohan hadda way xor u yihiin inay Webka ku soo rogaan oo ay ku xaydaan shisheeyaha cusub.
Lohan Marka ugu horeysay uu ka hadlay xiriirka u gaar ah tan intii uu u saftay in 2018 in "Celebrity Big Brother", ayay iyada qarsoodi ah aqoonsiga, laakiin Nadler oo aan ka waaban in aynu dunidu ku garato in uu ahaa jecel online.
Michael Lohan oo ah xaasigii hore ee Dina
"Marna uma diidin in uu la kulmo, ama la kulmo isaga, ama ka dib booqashadiisa ka dib" Taageerada Big Brother, "ayuu yiri Michael Lohan, 58. Bogga lixaad. "Kadibna wuxuu soo jeediyay warbaahinta bulshada, ka dibna wuu la jejebiyay iyada ... waxa ay u egtahay in ay leeyihiin bilow wanaagsan."
Wuxuu intaa ku daray: "Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa inay tahay wax khasaare ah ... Carruurteena iyo aniga waan ka soo horjeednaa! "
Lamaanihii hore waxay leeyihiin afar caruur ah, oo ay ku jiraan Lindsay, oo leh 32.